Cayaaryahanka Yaya Toure - BBC Somali
Cayaaryahanka Yaya Toure
Kadib markii uu ku guulaystay abaalmarinno badan sanadkii 2009, sanadkan wuxuu ahaa sanadkii Yaya Toure uu xaqiijiyay in uu yahay cayaaryahanka ugu qiimaha badan dunida.
Cayaaryahanka difaaca qadka dhexe wuxuu ka soo tagay kooxda aadka u wayn ee dalka Spain ee Barcelona, balse wuxuu noqday cayaaryahanka lacagta ugu badan ka qaata tartanka England Premiership abid, iyadoo todobaadkii uu qaato ilaa 221 kun, isagoo u cayaara kooxda Manchester City.
Wuxuu ku kordhiyay magaciisa iyadoo cayaarihii kama dambaysta eekoobka adduunka uu kooxda dalkiisa Ivory Coast u dhaliyay gool.
Toure wuxuu ka tagay Barcelona iyadoo qaaday koobkii labaad ee tartanka La Liga inkastoo booskiisii dhexda uu kala wareegay cayaaryahanka Sergio Busquets, balse si wayn ayuu u soo laba kacleeyay, markii uu ku biiray Man City lacag dhan 24 million oo gini heshiis shan sano ah oo lagu qiimeeyay guud ahaa ilaa 55m oo gini, ayaa tababar Roberto Mancini wuxuu ku tilmaamay Toure in lala galay heshiis aad u heer sareeya.
Booskiisa cayaareed ee dhanka kooxda Manchester City bannaanka ayuu u yaalay, taasina waxay keentay in Man City ay ka mid noqoto shanta koox ee ugu saraysa tartanka Premier League.
Iyadoo cayaarihii kama dambaysta ee koobka adduunka aysan Ivory Coast u tahay wax mudan in la iska hilmaamo, hadana Toure daqiiqad kasta oo ka mid ah sadexdii kulan ee kooxdiisa marna garoonka kama maqnayn.
Waxaana uu dhaliyay mid ka mid ah 3 gool oo Ivory Coast kaga badisay Waqooyi Korea oo aan waxba ka dhalin, wuxuu kaloo uu dhigay goolkii kaliya ee ay ka dhaliyeen kooxda Brazil oo kaga adkaatay 3-1.
Gacanta tag hadii aad rumaysan tahay oraahda ‘lacagtu way hadashaa’.
Taas ayaa doodad xal u ah – Ivory Coast iyo Manchester City, cayaaryahanka qadka dhexe uga cayaara Yaya Toure wuu mudan yahay in loogu codeeyo in uu noqdo sanadka 2010, cayaaryahanka ugu wanaagsan qaaradda Africa.
Qiimihiisa sare waxaa muujiyay tababaraha kooxda Manchester City Roberto Mancini oo ka dhigay abid cayaaryahanka lacagta ugu badan ka qaata tartanka English Premier League, iyadoo uu todobaadkii qaatao ilaa 221 kun oo gini.
Waa dhab, in Barcelona ay ka soo baahi baxday, balse yaa kaloo dhihi kara Toure uma qalmo mushaarkan sareeya.
Cayaartiisa heerka sare, hor istaagga kubadaha iyo kubad dhiibidda aadka u wanaagsan, kooxda City waxay ku mudatay afarta sare ee tartanka England Premiership, iyadoo difaaca uu adkeynayo cayaaryahanka Ivory Coast.
Cayaarihii kama dambaysta ahaa ee sanadkan, Toure wuxuu mar kale muujiyay in uu tiir u yahay kooxda maroodiyada loo yaqaan ee Ivory Coast, iyadoo goolna uu isagu dhaliyay midna uu dhigay.
Inkastoo Koobkii Qarada Qaaradda Afirca ee 2010, uu ahaa sida kan koobka adduunka mid ugu dhamaaday niyadjab kooxda Ivory Coast, hadana Toure wuxuu ahaa xiddig dhexda ka muuqda cayaartii heerka group-yada ee kooxda Ghana ay kaga adkaatay 3-1, hadana waxay kooxdu ku soo baxday kaalinta labaad.
Wuxuu kaloo u qalmaa in lagu sharfo cayaar wanaagiisa. Kooxdiisa Ivory Coast ilaa shan calaamadda digniinta ah ayay qaateen, isagana kama mid ahayn qalad-falayaasha.
Waxaan u badan nahay in aan weeraryahanada codka siino marka la qaadayo aftida cidda noqonaysa cayaaryahanka sanadka ee abaalmarinta BBC, balse Toure runtii wuu u qalmaa meeqaamkaas.
Si kastoo ay tahayba, lacagta ayaa cadayn u ah xirfadda uu leeyahay.